December 7, 2014 - Written by Puntland Fox
Puntland waxaa dhidibada loo taagay May 5,1998,aasaaska Puntland ma ahayn mid lagu dhisay laab lakac balse waxa ay ahayd Bisayl ka yimid Shacabka Mandaqada .
Dadka ku bahoobay Puntland Waa dad isir Wadaag ah,Ehel ah,Sabur badan oo sooyaal taariikheed oo fac weyn ku leh umadda Soomaaliyeed dhexdeeda,waana dad utashaday Dalkooda.
Hadaba inkastoo Faa iido weyn laga dhaxlay yagleelida Dowladda Puntland waxa nasiib daro ah in shacabka Puntland ay kujiraan dad Cadow ah oo bulshada dhexdeeda labaxay magacyo kala duwan,ku waasi oo mar walba u taagan bur burinta Puntland iyo Buun buuninta boro bogaandada.
Kooxahaasi aan kor ku soo sheegay qaybtood waxay afgambiyeen oo majaraha u xaaben Hogaamiyaashi Puntland Soomaray Tusaale hadaan usoo qaato dowladii hore ee uu Hogaaminayay Cabdiraxmaan Faroole waxaa Garab iyo Gaashaan u ahaa Koox dhiig miirato ah oo la baxdayAaran Jaan!!!
Kooxda Aaran Jaan Maxay Puntland ku soo Kordhiyeen!
Kooxda Aaran Jaan waxay ahaayen kuwii Gacan weyn ka gaystay dhaqaale Xumida Puntland ku baahday .
Puntland waxaa laf dhabar u ahayd Dekeda Boosaaso oo ahayd isha dhaqaalaha Puntland waxana ay ahayd meel ay ku xirnaayen Ganacsato Soomaaliyeed oo farabadan kuwaasi oo ka kala imaan jiray Ilaa kiilka Shanaad Gobolada dhexe iyo Meelo kale oo badan .
Sababtii ugu weyneyd ee loogu xirnaa Dekeda Wey nee Boosaaso waxa ay ahayd Canshuur dhimis iyo shaqo wanaag,Nasiib daro Kooxda Aaran Jaan oo xiligaasi Puntland Maamulka u haysay waxay ku guulaysteen in ay kor uqaadan canshuurta oo waliba ay gaarsiiyen heer aan laga hadli Karin wakhtigaasi,si Puntland dhaqaale Bur Bur ugu dhaco.
Waxay Ganacsatadii Meelaha fog fog ka imaanaysay iyo Ganacsatadii Puntland ku Kalifeen Kooxdaasi(Aaran Jaan) in iyaga iyo Ganacsigoodiba ay ka guuraan Dekeda Boosaaso iyo Guud ahaanba Puntland iyagoona u guuray Dekeda Berbera iyo Meelo kale.
Nolosha Shacabka Puntland waxa ay noqotay Xiligaasi mid daala dhacaysay Maadama wadanku uusan laheyn wakhtigaasi Wax soo saar dhaqaale Canshuurta yar ee ka soo baxda Wadankana waxa ay aheyd mid hal wado qaada (One Way)dadka iyo dalkana dib uguma soo noqon jirin oo waxa ay ku dhici jirtay Jeebka Shakhsiyaad katirsanaa kooxdaasi oo uu ugu horeeyay Wiilka uu dhalay Cabdiraxmaan Faroole ee lagu magacaabo Maxamed Faroole.
Lacagtii ku dhici jirtay Jeebka Maxamed Faroole waxa uu u adeegsan jiray Furashada Gancsiyo iyo Dhisida Guryo waaweyn oo uu hada ku leeyahay Magaalo madaxda Puntland ee Garoowe sidookalana waxa uu buuxsaday Akoonadii uu ku lahaa Bangiyada qaybtood.
Hada kahor baa nin Oday ah oo dadkiisa kujira waxa uu yiri isagoo caraysan kana carysnaa hagar daamooyinki ay shacabka Puntland ku hayeen kooxda Aaran Jaan ‘’caasimadii camirnayd waxa sidan baday nimanka gurigaas ku xoonsan ee ha la waydiiyo”sidookalana waxa uu intaas raaciyay ‘’Xamar baa lakala sheegtay oo eedaye Garoowe ma lamid bay noqotay’’
Tusaale waxaa inoogu filan Gudoomiyihii Gobolka Nugaal Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo hada xilka qaadis uu ku sameeyay madaxwayne Gaas Allaha Dhowree in Magaalada Garoowe uu ka saaray odayaal Nabadoona ah oo ka socday Gobolka Bari,isagoona ku yiri sidan ‘’Dhulkiina ku noqda Magaaladaan Gali maysaane ‘’
Waxaa jiray ereyo laga tiriyay Kooxdaasi iyadoona ereyadaasi lagu tilmaamay hab dhaqankoodi qalafsanaa iyo sida ay wax umaamuli jireen.
ciroole hadii la caayey
culimadii hadii la cayrshey
caamadii laga doonay ciirsi
cisyaankii camal la mooday
cuqashii la cisi wayey
colaad yuu nagu abuurine
intaan curadadu dhamaanin
cirrole intaan la waayin
cakuye naga cayrsha aayar!
Hab dhaqankii Maamulkii,Wasiiradii iyo Kooxda Aaran Jaan?
Maamulkii Kooxda Aaran Jaan waxa uu noqday Maamulkii ugu Wasiirada Badnaa waxana ay tiro ahaan gaarayeen (70)Wasiir kaaga daranka waxay ahaayen dhufaano shaqadooda aan umadax banaaneyn waxana ay si toos ah uga amar qaadan jireen Wiilka uu dhalay Faroole (Maxamed Faroole).
Waxaa inta badan masraxa ka soo muuqan jiray dhowr nin,waxana ay ahaayen badankood kuwo Faroole u raaci jiray Meelaha uu booqanayo,ujeedka ugu weyn ee ay u raaci jireena waxa ay ahayd in ay ka soo muuqdaan shaashadaha.
Kooxda Aaran jaana waxa ay ahaayen kuwo Haystay Dhegta Madaxwayne Faroole,waxana inta badan ay u daari jireen Musal-sal iyo hadal aan meel gaarin nasiib darada ugu weyn waxa ay ahayd uma sheegi jirin odayga wax dhaafsiisan albaabka laga soo galijiray halka Xafiiska u ahayd.
Muxuu Yahay Wajiga Cusub ee ay layimaaden Kooxda Aaran Jaan?
Kadib markii ay Wereejiyeen xilkii kuna wareejiyeen Madaxwaynaha Hada Talada haya Puntland Madaxweyne Dr.Cabdiwali Maxamed Cali Gaas waxa ay bilaaben Kooxdaasi Hagar Daamoyin ay isleeyihiin waxaad ku curyaamisaan Maamulka Xalaasha ee ka hanaqaaday Puntland.
Talaabooyinka ugu waaweyn ee ay qaaden Kooxdaasi waxaa kamid ah Aasaasida Webseedyo ay si gaar ah u liyiihn waxana kamid aha Webseedadaasi Puntlandnow,Puntlander,Puntlandtoday,
Yaa Maal Galiyay Webseedadaasi?
Maalgalinta Mareegahaasi waxaa Gacan weyn ka gaystay oo waliba fududeeyo in lagu daabaco Wararka beenta ah iyo aflagaadada joogtada ah waa Wiilka uu dhalay Madaxwaynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ee Lagu Magacaabo Maxamed Faroole .
Waxaan shaki kujirin in Maxamed Faroole uu Mareegahaasi hawada ugaliyay Sidii uu Hogaanka Suuban ee kajira Puntland umajara xaabin lahaa,Ceebtiisana Maahan ee waa caadadiis in Falalka noocaan oo kale ah ku dhaqaaqo .
Akhriste waxaa sidookale jira in Maxamed Faroole uu sigaar ah u leeyahay Radio Garoowe,waxana hada kabaxa idaacada Warar lidi ku ah Amaanka iyo kala danbayta kajirta Guud ahaan Gobolada Puntland .
Waxaan Wali xasuusana oo aan maankayaga ka bixin Dagaalkii dhanka Warbaahinta ahaa ee lagu qaaday Madaxwaynihii hore ee Puntland Gen:Maxamuud Muuse Xirsi inta uusan Puntland Madaxwayne ka noqon Cabdiraxmaan Faroole.
Hogaamiyaha Puntland ee Hada waa noocee?
Hogaamiyaha Puntland ee Maanta Waa:-
ilaah ka cabsada oo cadaalad u saaxiib ah
leh aqoon iyo xirfad hogaamiyanimo.
Aamin ah oo dhowra hantida umada.
Daacad ah oo dadka u dabacsan.
Dhegaysta shacabka dantiisana ka hor mariya tan shaqsi.
Abuura jawi siyaasadeed oo hufan sida hada muuqata.
Arimaha bulshada xooga saara .
Mideeya oo isu soo ururiya shacabka isir wadaaga ah.
Abuura dowlad wadaag iyo maamul baahsan (Good Governance).
Gaba gabadii waxaa leeyahay oo aan talo ku soo jeedin In Mudane Madaxwayne aadan u fiirsan Khaladaadka ay shacabka iyo Dowladaba ka galayaan Kooxdaasi dhiig miiratada ah ee dantoodu tahay iska horkeenida Shacabka iyo Dowladda Puntland.
Kuwa la shaqeeya ee aan ogahayna waxaan leeyahay Ciyaalkaas Ina Faroole Cirwaynaha aan dhargeynin waa kuwo aan ceebtuba karaynin.